Ebe ịchụàjà insens (1-10)
Ụmụ nwoke ga-akwụ ụgwọ iji gbara ndụ ha ma a gụọ ha ọnụ (11-16)
Nnukwu ite e ji ọla kọpa kpụọ a gbanyere mmiri (17-21)
Ihe ndị pụrụ iche e ji mee mmanụ e ji ete mmadụ mmanụ (22-33)
Ihe ndị e ji eme insens nsọ (34-38)
30 “Ị ga-arụ ebe ịchụàjà nke a ga na-amụ insens* na ya.+ Ị ga-eji osisi akeshịa rụọ ya.+ 2 Ọ ga-enwe akụkụ anọ há nhata, dịrị otu kubit* n’ogologo, otu kubit n’obosara, na kubit abụọ n’ịdị elu. Ị ga-arụkọta ahụ́ ya na mpi ndị ga-adị na ya ka ha bụrụ otu.+ 3 Ị ga-eji ọlaedo a na-agwaghị agwa machie ya: ma elu ya ma akụkụ ya niile gbaa gburugburu ma mpi ndị ga-adị na ya. Ị ga-eji ọlaedo kpụọ ihe ịchọ mma gburugburu ọnụ ya. 4 Ị ga-ejikwa ọlaedo kpụọ ihe abụọ dị okirikiri n’otu akụkụ ya nakwa n’akụkụ ya nke ọzọ, n’okpuru ihe ịchọ mma a kpụrụ n’ọnụ ya. Ha ga na-ejide okporo osisi ndị a ga-eji na-ebu ya. 5 Jiri osisi akeshịa rụọ okporo osisi ndị ahụ ma jiri ọlaedo machie ha. 6 Ị ga-adọsa ya n’ihu ákwà mgbochi ahụ nke dị nso n’igbe ọgbụgba ndụ*+ ahụ. Ọ ga-adị tupu ebe a dọsara igbe ọgbụgba ndụ ahụ na okwuchi ya, bụ́ ebe m ga-apụta n’ihu gị.+ 7 “Erọn+ ga na-amụ insens na-esi ísì ọma+ n’elu ya.+ Ọ ga-eme ka ọ kwụọ anwụrụ ọkụ n’oge ọ na-edozi ọkụ* ndị ahụ+ kwa ụtụtụ. 8 Erọn ga na-amụnyekwa insens* mgbe ọ na-amụnye ọkụ* ndị ahụ ná mgbede.* Ọ bụ àjà insens a ga na-achụ n’ihu Jehova n’ọgbọ unu niile. 9 Unu agaghị achụ àjà insens iwu na-akwadoghị+ ma ọ bụ chụọ àjà a na-esu ọkụ ma ọ bụ àjà ọka n’elu ya. Unu awụsakwala àjà mmanya n’elu ya. 10 Erọn ga-achụ àjà ikpuchi mmehie n’elu mpi ndị dị na ya otu ugboro n’afọ.+ Ọ ga na-eji ọbara anụ e ji achụ àjà mmehie achụ àjà ikpuchi mmehie maka ya+ otu ugboro n’afọ n’ọgbọ unu niile. Ọ* bụ ihe kacha nsọ n’anya Jehova.” 11 Jehova wee gwa Mosis, sị: 12 “Mgbe ọ bụla ị gụrụ ụmụ nwoke Izrel ọnụ ka ị mata ole ha dị,+ onye ọ bụla n’ime ha ga-enye Jehova ihe ọ ga-eji gbara ndụ* ya mgbe a na-agụ ha ọnụ, ka ihe ọjọọ ọ bụla ghara ime ha mgbe a na-edeba aha ha n’akwụkwọ. 13 Ihe a bụ ihe onye ọ bụla e debara aha ya n’akwụkwọ ga-enye: ọkara shekel* e ji shekel dị n’ebe nsọ*+ tụọ. Gira* iri abụọ bụ otu shekel. Ọ bụ ọkara shekel bụ onyinye a na-enye Jehova.+ 14 Onye ọ bụla e debara aha ya n’akwụkwọ, bụ́ onye dị afọ iri abụọ ma ọ bụ karịa, ga-enye Jehova onyinye.+ 15 Ọgaranya agaghị enye ihe karịrị ọkara shekel,* ogbenye agaghịkwa enye ihe dị ala karịa ọkara shekel ka ọ bụrụ onyinye ọ na-enye Jehova iji gbara ndụ* ya. 16 Ị ga-anata ndị Izrel ego ọlaọcha ahụ ha ji gbara ndụ ha, jiri ya kwado ọrụ a na-arụ n’ụlọikwuu nzute, ka o wee bụụrụ ụmụ Izrel ihe ncheta n’ihu Jehova, ka ọ bụrụ ihe unu ji agbara ndụ* unu.” 17 Jehova gwakwara Mosis, sị: 18 “Jiri ọla kọpa kpụọ nnukwu ite na ihe a ga-eji adọkwasị ya.+ Dọsa ya n’agbata ụlọikwuu nzute na ebe ịchụàjà ma gbanye ya mmiri.+ 19 Erọn na ụmụ ya ndị nwoke ga na-asa aka ha na ụkwụ ha n’ebe ahụ.+ 20 Mgbe ha na-abanye n’ụlọikwuu nzute ma ọ bụ mgbe ha bịara ebe ịchụàjà nso ka ha jee ozi nakwa ka ha chụọrọ Jehova àjà ma mee ka anwụrụ ọkụ ya kwụgoo elu, ha ga-eji mmiri sachaa onwe ha ka ha ghara ịnwụ. 21 Ha ga-asa aka ha na ụkwụ ha ka ha ghara ịnwụ. Ọ ga-abụkwara ha iwu ha ga na-edebe mgbe niile, ma yanwa ma ụmụ ya, n’ọgbọ ha niile.”+ 22 Jehova wee gwa Mosis, sị: 23 “Weta ihe ndị a kacha mma na-esi ísì ọma: mea kpụkọrọ akpụkọ dị narị shekel* ise (500), na sinamọn na-esi ísì ọma nke bụ́ ọkara ya, ya bụ, narị shekel abụọ na iri ise (250), kalamọs na-esi ísì ọma nke dị narị shekel abụọ na iri ise (250), 24 nakwa kashịa dị narị shekel ise (500), nke e ji shekel dị n’ebe nsọ* tụọ,+ nakwa mmanụ oliv dị otu hin.* 25 Jiri ha mepụta mmanụ nsọ a ga-eji na-ete mmadụ mmanụ. A ga-agwakọta ha nke ọma.*+ Ọ ga-abụ mmanụ nsọ a ga-eji na-ete mmadụ mmanụ. 26 “Ị ga-eji ya tee ụlọikwuu nzute na igbe ọgbụgba ndụ* mmanụ,+ 27 teekwa tebụl ahụ na arịa ya niile, ihe e ji adọsa ọkụ* na arịa ya niile, ebe ịchụàjà insens ahụ, 28 ebe ịchụàjà nke àjà a na-esu ọkụ na arịa ya niile, na nnukwu ite ahụ na ihe a ga-eji adọkwasị ya. 29 Ị ga-eme ka ha dị nsọ ka ha wee bụrụ ihe ndị kacha nsọ.+ Onye ọ bụla nke ga-emetụ ha aka kwesịrị ịbụ onye dị nsọ.+ 30 Ị ga-etekwa Erọn+ na ụmụ ya ndị nwoke mmanụ+ ma mee ka ha dị nsọ, ka ha wee bụrụ ndị nchụàjà m.+ 31 “Ị ga-agwa ndị Izrel, sị, ‘Mmanụ a ga-abụrụ m mmanụ nsọ a ga-eji na-ete mmadụ mmanụ n’ọgbọ unu niile.+ 32 A gaghị ete ya mmadụ n’ahụ́. Unu agaghịkwa eji ihe ndị e ji mee mmanụ a mepụta ihe ọ bụla. Ọ bụ ihe dị nsọ. Ọ ga na-abụrụ unu ihe dị nsọ. 33 Onye ọ bụla nke mere mmanụ otite dị ka ya ma tee ya onye na-abụghị onye nchụàjà,* a ga-egbu ya.’”*+ 34 Jehova wee gwa Mosis, sị: “Weta ihe ndị a na-esi ísì ọma:+ mmanụ stakti, ọnịka na-esi ísì ọma, galbanọm na-esi ísì ọma, na frankinsens a na-agwaghị agwa. Otú otu hà ka ibe ya ga-aha. 35 Jiri ha mee insens.*+ A ga-agwakọta ha nke ọma,* tinye ya nnu.+ A gaghị etinye ya ihe ọzọ, ọ ga-adịkwa nsọ. 36 Ị ga-asụ ụfọdụ n’ime ya nke ọma ka ọ dị ka ntụ ma dowe ụfọdụ n’ime ya n’ihu igbe ọgbụgba ndụ* ahụ dị n’ụlọikwuu nzute, bụ́ ebe m ga na-apụta n’ihu gị. Ọ ga-abụrụ unu ihe kacha nsọ. 37 Unu emerela onwe unu insens nke e ji ihe ndị a mee.+ Unu ga-ewere ya ka ihe dị nsọ n’anya Jehova. 38 Onye ọ bụla mere ihe ọ bụla dị ka ya ka ọ nụrụ ísì ọma ya, a ga-egbu ya.”*
^ Ihe dị ka sentimita 44.5 (inch 17.5). Gụọ B14.
^ Na Hibru, “n’igbe Ihe Àmà.”
^ Ya bụ, ebe ịchụàjà insens ahụ.
^ O nwere ike ịbụ ọlaọcha. Otu shekel bụ gram 11.4. Gụọ B14.
^ Ma ọ bụ “e ji shekel dị nsọ.”
^ Ma ọ bụ “Ọ ga-adị ka nke onye na-eme mmanụ otite mere.”
^ Na Hibru, “tee ya onye mbịarambịa,” ya bụ, nwoke na-esighị n’ezinụlọ Erọn.